नोभेम्बर ८ तारिख, बि.बि.सि. नेपाली प्रसारणमा ताप्लेजुङ संवाददाता सीता निरौलाको समाचारमा ताप्लेजुङको विकट गाँउ, वलाङचुङ गोलाकी एक महिला विदेशमा रहेका आफ्नो छोरासँग टेलिफोन गर्न ४ दिन लगाएर सदरमुकाम दुई पटक आएको तर टेलिफोनको समस्याको कारणले फोन गर्न नसकेको दु:खेसो उनकै आवाजमा सुन्दा मन दु:खले भरियो। एक कल फोन गर्न ४ दिन लगाएर आउँदा उनले कति शारिरिक दु:ख भोगेकी होलीन् ? ४ दिन सम्म घरको कामकाज अझ वालवच्चा रहेछन् भने तिनीहरुको हेरविचारको व्यवस्था कसरी गरिन् होलीन् ? आदि/ईत्यादि थुप्रै समस्याका प्रश्नहरु श्रव्यदृश्य झैँ मेरो सामु आइरहयो। मलाई लाग्छ वलाङचुङ गोलाकी ती महिलाले देशभरका दूर्गम पहाडी गाँउहरुको प्रतिनिधित्व गर्छिन्। यधपि नेपाल सरकारले सबैको घरघरमा ईन्टरनेट र हातहातमा मोबाईलको व्यवस्था गर्ने योजना बताइरहे पनि वास्तविक स्थिति यस्तो छ।
झल्याँस्स सम्झेँ, एसियाको नोवेल मानिने रामोन म्याग्सेसे पुरस्कार प्राप्त गर्ने डा. महावीर पुन, उनको नेतृत्वमा शुरु भैरहेको ताररहित ईन्टरनेट, यसबाट पुर्याउन सकिने सुविधाहरु, यसको लागि उनले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुबीच शुरु गरेका ‘वन डलर अ मन्थ’ अभियान र गैर आवासीय संघ। सोचें यसपटक यसै सन्दर्भवमा मत/मतान्तर किन नलेखुँ ?
डा. महावीर पुन विगत एक दशक देखि आफ्नो जन्मस्थान म्याग्दीको नाङ्गी देखि शुरु गरेर अहिले देशका दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरुमा ताररहित ईन्टरनेट प्रविधिको संजाल बिच्छाइरहेका छन्। औसत नेपालीहरुको सपनाको देश सोच्ने विश्वको वैभवशाली देश अमेरिकाको केयर्नी स्थित नेब्रस्का विश्वविधालयबाट उनले उच्च शिक्षा हासिल गरेर त्यहाँ नबसी सिधै जन्मस्थान नाँङगी गएर कर्म क्षेत्र रोजे। २४ वर्ष पछि आफ्नो जन्मस्थान जाँदा कसैले नचिनेको बताउने डा. महावीर पुनको सत्य कथा एका देशको कहानी जस्तो लाग्छ हामीलाई। तत्पश्चात उनले स्वयंसेवकको रुपमा अहिल नाँङगी देखि देशका दूर्गम पहाडी गाँउहरुमा आफ्ना पैतला खियाइरहेका छन्। औसत नेपालीहरुको सपना भन्दा फरक सोचका साथ तपस्या गरिरहेका छन् नेपाल र नेपालीको लागि।